150W ọkụ ụgbọala na-adọba ụgbọala na-adọba ụgbọala China Manufacturer
Nkọwa:Ebube na-echekwa ụgbọ mpempe akwụkwọ,150W Igwe ọkụ ụgbọala nke ụgbọala,150W Na-ekpuchi Ìhè
Home > Ngwaahịa > Egwuregwu Gas > 150W ọkụ ụgbọala na-adọba ụgbọala na-adọba ụgbọala
Ihe Nlereanya.: BB-CSD-150W-G
Igwe na-adọba ụgbọala anyị na- eduzi ìhè na- eji mma iṅomi 3030 Diana Chip, nwere ike iguzogide nrụgide dị elu ma kesaa ìhè.
Nke a na-eji ọkụ ọkụ ọkụ 150W na- eji ọkwọ ụgbọ elu dị elu, ya na asambodo CE ROHS abd afọ atọ.
Ugbo oku nke 150W anyị eji nkà na ụzụ ọhụrụ, nke na-erughị 3% attenuation na 1000hrs ka ọdịnala ọdịnala dịkarịa ala 30%, na-eme ka a na-eduba 100W ọzọ mara mma. Ụlọ ọkụ na- enwupụta ọkụ na aluminom, a na-emeso ụlọ elu nke 150W n'èzí site na nzebichi, mara mma ma dị elu. Nnukwu ihe mgbochi na nkwụsị dị mma.
Nke a na- ebute ọkụ ọkụ 150W na-eme ka ihu igwe dị mma, ọ bụghị UV na radiation radiation, na-adịghị emerụ ahụ ike na anya mmadụ.
75w 9750Ọbụrụ na-enwu enwu Kpọtụrụ ugbu a
100w 13000Lumen Led Light Post Top Kpọtụrụ ugbu a
150w 19500Ọbụrụ na-eme ka ìhè dị elu Kpọtụrụ ugbu a
Super Bright 100W LED UFO Ìhè Kpọtụrụ ugbu a
Ebube na-echekwa ụgbọ mpempe akwụkwọ 150W Igwe ọkụ ụgbọala nke ụgbọala 150W Na-ekpuchi Ìhè N'èzí na-echekwa ụgbọala mpempe akwụkwọ Ụlọ ahịa ụgbọala mpempe akwụkwọ Ebe nchekwa ụgbọala ụgbọala Ebe nchekwa ụgbọ mmiri gas Ebube na-enwu maka ụlọ ụlọ